Etu aga - agbanwe Ntụgharị foto na 3D - LucidPix
Etu aga-agbanwe Ntụgharị Foto mgbe niile na 3D
LucidPix nwere ike ime karịa ịgụnye ihe osise 3D na foto ma ọ bụ weghara foto 3D, ọ nwekwara ike ịde foto 2D oge niile na ekwentị ma ọ bụ igwefoto ọ bụla wee gbanwee ya na 3D Fusion Engine dị elu. Usoro a dị mfe ma dị mfe na-eji ọgụgụ isi dị elu nyocha ihe osise gị ma mee ka ha dị ndụ n'akụkụ atọ niile.
Kwụpụ 1: Budata na Ẹkedori LucidPix
Ọ bụrụ na ịmebeghị mbụ, ihe mbụ ị ga - eme bụ budata ma wụnye LucidPix. Ngwa ahụ dị maka ma gam akporo na ngwaọrụ iPhone, ọ ga-agba ọsọ na akacha ọ bụla smartphone, site na ekwentị flagship ọhụụ na mgbịrịgba na whistles gaa na ndị nwere mmefu ego kachasị mma na ọtụtụ afọ azụ.
Kwụpụ 2: Họrọ Nchigha 3D
Kpatụ akara ngosi igwefoto ịbanye ọnọdụ edegharị ma pịa gaa n'aka ekpe ugboro abụọ ka ịhọrọ Ntụgharị 3D. Nke a ga-ebugote foto foto ekwentị gị na-akpaghị aka, ebe ị ga-agagharị na foto ịchọrọ ịgbanwe site na ụzọ abụọ gaa na foto atọ. Ozugbo ị chọtara foto gị, pịa ya iji họrọ ya, wee pịa Tinye 3D Photo ka LucidPix mee anwansi ya.
N'okwu a, anyị jidere foto site na Pexels.com, saịtị anyị na-aga maka mma dị elu, foto efu.
Kwụpụ 3: Kewaa Ihe Okike Gị
Ugbu a ị meworị foto 2D gị ka ọ bụrụ foto 3D nke LucidPix, ọ dị mkpa ka ị kee ụwa ya! You nwere ike ime ya ọsọ ọsọ site na ịkekọrịta ya dịka foto 3D nke obodo, ma ọ bụ site na mbupụ dị ka GIF ma ọ bụ vidiyo vidiyo animated. Naanị kpatụ bọtịnụ Share ịhọrọ foto 3D Facebook dị ala, ma ọ bụ pịa Kpido vidiyo ịchekwaa vidiyo MP4 maka Snapchat, Instagram ma ọ bụ TikTok, ma ọ bụ nwee ike pịa Mepụta GIF iji mee GIF di egwu maka ikesa ebe obula.
LucidPix gbanwere foto 3D di ka GIF
Etu aga - agbanwe Ntụgharị (ma ọ bụ Art) gị gaa na LucidPix →← Etu ị ga - esi mee LucidPix 3D Mee